Sokuqonda isandla imigqa: ukubhula ngokufunda intende
Zonke okungaziwa endulo eside ukhangwa abantu. Omunye sciences ezithakazelisa kunazo - ukubhula ngokufunda intende. isandla umugqa uzokwazi niyikhulume le ndoda lokho ofuna ukufihla. Kulokhu, zizokutshela nokuthi ngubani umuntu ayikho ngempela, hhayi lokho akubonayo yena. Sokuqonda isandla imigqa - eyodwa yezindlela enemisebenzi kakhulu ukufunda mayelana nohlobo isihloko, izintandokazi zayo, futhi kungenzeka, uma unenhlanhla, amazwibela ikusasa layo: okude hhayi ngakho. Ukubhula ngokufunda intende ekutshela indlela umuntu futhi yini okufanele uyilindele kulokho kuye.
Kuyini ukubhula ngokufunda intende?
Imigca isandla ongamtshela okuningi okumayelana nomuntu. Ukubhula ngokufunda intende angachaza ikusasa lakho esekelwe usithe ongelutho amafomula esandleni sakho.
Umugqa main entendeni
Sekukonke kukhona imikhakha eyisithupha eyinhloko kusezandleni zethu: Life Line, okubandakanya umugqa Mars, kanye namasongo ezintathu esidayisa; Line of Fate; umugqa Head; Isibindi umugqa equkethe indlela inkanuko ulayini Intuition; Sun umugqa futhi, yebo, umngcele Kwenhliziyo, okubandakanya umugqa ubunye kanye le Esilima Venus.
Njengoba cishe kakade, imigqa ezinemibala ku entendeni ibalulekile kakhulu ukubhula ngokufunda intende. Uma sibheka isayensi wokufunda uhlangothi, eladabuka India, kungenzeka ukuqoka nane izinhlobo imigqa, ichashazi entendeni.
sicebi ichaze imigqa elikhanyayo, ecacile futhi abukhali. Uma ngakolunye uhlangothi umugqa okhanyayo, kusho ukuthi impilo kuncike ibuthakathaka, kanti yena ubelokhu ukuntula ukuzimisela nangamandla. A uphawu enkingeni futhi ezicashile, imigqa ezomile. Yellowness uthi igazi ndaba Bile, uyaziqhenya, agodliwe futhi, cishe, kuyinto zobugovu. Lines abomvu zibonisa ukuthi umuntu enempilo, esebenzayo kanye Ubumnene esheshayo, futhi okuhle amahlaya. ubunjalo ojezisanayo, bezikhukhumeza bese engathetheleli lomuntu ukunikeza umugqa amnyama. Uma imigqa ijulile, umuntu uyajabula futhi unesihe. T
onkie imigqa ukhombise ukuqongelela ingcebo. Mayelana phetho evumayo nangenkathi uthi unxantathu maphakathi entendeni. Ukuntuleka kokukhulumisana amandla, ukulahlekelwa yokuntuleka ezinhle futhi ephelele ukusebenza ekhishwe umugqa eziphukile. Mayelana kwemihelo abonisa imigqa esifushane, yona evame ukuqonda isici ekhelini. Kubhekwe umugqa okungekuhle futhi engalingani phansi. Labo umugqa ofanayo babonwa emi entendeni yesandla sakho endaweni engafanele. Uhluke is babanjwa futhi imigqa ezijulile, babe ecacile, ukukhanya kanye ubude oyifunayo.
imigqa olungenzeka ukukhubazeka
Ukuqagela engalweni kanye imizila, noma ukubhula ngokufunda intende lifundisa ukuthi evumayo kuphela labo imigqa ukuthi kukhona kahle ngesineke futhi mincane. Nokho, ingalo ngamunye ingase ibonise ezihlukahlukene imigqa edabukile, engalingani noma okubi anemibala nezingahlobene. Ziqukethe zonke izinhlobo izimpawu izimpawu, ezimweni eziningi ezibonisa imigca entendeni ukukhubazeka, okuyinto ucishe okungekuhle.
Iqiniso lokuthi umzimba iba buthakathaka, libonisa mihlobiso, uchungechunge, umugqa ephukile okungacaci noma umugqa kokuba isiqhingi. Uma umugqa siphukile, lithembisa izithiyo lokugula, amashwa kanye sokukhaphela. Line, ziphethe ibhulashi, lithi kuzo, futhi kukhona kuncike kubuhlungu, ubuthakathaka kanye nokuntuleka unezimfanelo ezinhle. A kuwuphawu olubi kakhulu ubhekwa inkanyezi, esisogwini omunye imigca. Njengomthetho, kuba ingozi, ukushaqeka, ukucindezeleka noma amashwa ebulalayo kwaze kwaba sekufeni kwakhe. Kodwa lokhu kumele iqinisekise ngamanye nakomaka esisogwini isandla. Uma noma iyiphi imigqa ukuwela ingalo, ngaphandle komugqa izinhliziyo nezingqondo, basuke kubhekwe uphawu okungekuhle. Intersecting nihlale kulo mugqa - kuwuphawu olubi, ngoba kumelwe uqhubeke. Uma umugqa has inkulumo ngokujulile esiphambanweni, limelela isithiyo noma iyinkomba yokuthi impilo engeyinhle noma izinguquko global empilweni. A uphawu ezimbi uma umugqa kuhlukaniswa futhi buthaka. Uma umugqa likhona iphuzu, ibhekisela isiyaluyalu nayo ngesiphazamiso. ilungu Cross emgqeni futhi kuwuphawu olubi elikhombisa ukukhubazeka impilo noma isithiyo. I ajulile njengoba linjalo, njengeliyiZwi sibi kakhulu. Kubi, uma umugqa emva ikhefu lakhe sibuyela lwaluvelaphi.
Imigqa engalweni ushintsho - inkathazo noma injabulo?
Izimpawu ku entendeni abe ukubaluleka ngokwengqondo. Ubuchopho kudala futhi lishintsha imigca isandla. Ukuqagela esandleni kanye imigqa efakazela ukuthi lezi zinguquko zenzeka kuphela amagatsha noma abafuna phezulu noma phansi imigqa, okuyinto asuke main.
Umugqa main asishintshi futhi isakhiwo noma indawo. Lokho, bathi, indlela yokuphila sezizonke yomuntu futhi ubonise inkambo yakhe yokuphila zemvelo. Nakuba imigqa emihle, yona evame ukuqonda isici ziyafika zidlule, tshela ngezenzakalo kungenzeka esikhathini esifushane, kodwa futhi zibonisa ukuthi umuntu acabanga ngayo nazizwa ngayo imibono yakhe yamuva kanye nezinhloso eziyize.
Sokuqonda isandla imigqa uvumele ukwazi indoda enjengoba enjalo. Akakwazi kubonakale kwabanye, noma ukushintsha iphethini ezandleni ikakhulukazi.
Yini izimpawu mahle kakhulu?
Sokuqonda isandla imigqa lizisho izimpawu ezintathu ezilandelayo, khona okuzokwenza nje ukuzuza umnikazi. Ake sihlole kubo ngokuningiliziwe.
Okokuqala, kufanele kuphawulwe ukuthi imigqa kabili uhlangothi, ngokuvamile lisho okuthile okuzuzisayo musa athembisa yisiphi isifo noma inkathazo.
Uphawu lokuqala - a Trident elisemandleni ekupheleni umugqa. Ngokuvamile, lokhu kungena ngemvume itholakala enisemikhawulweni imigqa weSimiselo, Health, ilanga. Nokho, kungase kube kunoma iyiphi enye umugqa, okuyinto ahlelwe ngenhla. Uma kunezinkomba zokuthi uchitha incazelo lemigqa esandleni sakhe, ngaphawula Trident, khona-ke yazini ukuthi uzophumelela yezimali kanye neminye imicimbi lalibe nesiqalo esihle. Nokho, kumelwe kube kahle ichazwe futhi kuyabonakala.
Eyesibili uphawu evumayo - square, Ukuvikelwa okubonisa. Umsebenzi wayo - ukuvikela kusukela ingozi kubantu. Sokuqonda isandla imigqa njengoba isayensi uthi isikwele, atholakala kunoma iyiphi umugqa, asivikele izimfanelo ngokweqile womuntu elifanekisela umugqa. Le lebula ivikela isihloko kuwo wonke ukulahlekelwa kungenzeka lwezimali oluvela enhlanganweni i ekulahlekelweni isikhundla sabo noma umsebenzi, kanye ukwehluleka ezimweni zansuku zonke. Ukubhula ngokufunda intende uthi ukuma ekhanda umugqa wakho isikwele ukuvimbela zonke izinhlobo ukulimala ebuchosheni. Uma lokhu uphawu eduze Line weSimiselo futhi itholakala ngaphansi igquma Saturn, kungenzeka ukugwema ingozi. Isikwele, sise umugqa Inhliziyo, kusho ukuthi esikushoyo kungase kube umuzwa elihlobene ne ethandekayo othandekayo. Uma kukhona uphawu entabeni Saturn, ke kufakazela mayelana oluzayo amashwa esindayo lapho kusehlela ozithandayo ngokushesha.
Enye iningi uphawu lalibe nesiqalo esihle - imali eyiphepha akha umugqa engalweni. I unxantathu ezakhiwe emigqeni futhi imigqa weSimiselo Ingqondo athembisa ukuchuma ngokwezimali.
Umugqa wokuqala kakhulu evele entendeni womuntu - a umugqa zokuphila. It uqala ukwakha at esiteji ukuthuthukiswa embryonic lapho ephenduka esingamasonto ayisishiyagalombili. Ngemva ukubukeka emgqeni zokuphila uqala ukwakha umugqa Inhliziyo, bese emgqeni Kwengqondo.
Kufanele kuqashelwe ukuthi zonke lezi zimpawu ezandleni yengane avele eside ngaphambi kokuba bakwazi ukuhambisa noma ukukhombisa yomsebenzi, ngakho-ke abakwazi kubhekwe creases njengoba ngokukhululekile eyakheke ukuthi kwamiswa ngenxa yokuthi abantu basebenze ngezandla zabo, njengoba siqinisekiswa abanye abagxeki.
Ngakho, uhlobo inkomba ubungqabavu kanye nokusebenza ngokuphumelela umuntu emgqeni ukuphila. Lokho-ke uyakwazi ukubonisa inani ubungqabavu possessed indoda, futhi izinga lempilo. Futhi, emgqeni ukuphila kubonisa ukuthi uzimisele kanjani, umuntu onamandla futhi sinamandla.
Umugqa main esiseduzane kumila iminwe, - umugqa Inhliziyo. Lokhu uphawu entendeni ungakhuluma mayelana sphere ngokomzwelo yomuntu. Through the Heart, ungakwazi ukuqonda lokho ubuhlobo tesifundvo kunezelwa nabantu ababemzungezile. It kuvela onqenqemeni entendeni engaphansi komunwe kancane futhi iphela, ngokuvamile endaweni ephakathi isithupha kanye index ngomunwe. Okungukuthi, abangabantwana umugqa kweqa yonke entendeni izinhliziyo.
Umgudu Umshado iseduze emaphethelweni entendeni engaphansi komunwe kancane. Uma ukhuphuka, kusho ukuthi indoda angeke ashade. Kulabo ungafisi ukuthola umndeni kanye labo abaye balahlekelwa abangane babo bomshado, umfelokazi umugqa liyavela isandla. Enye umugqa ubhekwa inhlasi Mercury.
Lena ngenye yama-imigca ezisebusweni isandla. Shona umugqa, noma Uma, wathi mayelana intelligence yomuntu. Kuleli umugqa ungafunda kanjani ukuba akhulelwe isihloko emazingeni ahlukahlukeneko wendlela ukuphila kwabo. On ke ungakwazi ukunquma ukuthi ukuya kumuntu okonile axazulule izinkinga zokuphila futhi bangene ezinkathazweni, kanye ufunde mayelana nesimo sakhe sengqondo ukuphila.
Ukubhula ngokufunda intende ukholelwa ukuthi umnikazi we ingqondo ilawulwa ubude kulo mugqa. Kodwa kuhle ukuthi uzinake wena ukuthi ngisho noma emgqeni ikhanda lide ngokwanele, akusho ukuthi umuntu uzokwazi ibone amakhono zabo zomqondo egcwele. Kungani? Ngenxa isihloko umugqa omfushane Uma efuna indawo empilweni, impumelelo kakhulu kunobuhle isihloko ujenga, Lenya ngandlela-thile azibonakalise.
Umugqa phezu uhlangothi, emaphakathi bese zibheka ukweqa entendeni - a umugqa Phetho. It kuvela ngesikhathi esihlakaleni futhi ulwela phezulu kuya phansi iminwe. Kuvele isici esithakazelisayo lo mugqa ukuthi usungaqala nganoma yingasiphi kakhulu ngesisekelo ezandleni zakhe. Kodwa njengoba umthetho, it umsuka cishe maphakathi kanye izimisele umunwe phakathi.
Destiny Line libonisa ukuthi ukuphila nezifiso eliqhutshwa umuntu ekhuluma amathuba akhe kanye nesifiso impumelelo empilweni. Uma oyedwa entendeni Line of Fate ke, ukuthi phakathi nesikhathi eside izosebenza ukuze uqaphele iphupho lakhe, noma ukufeza injongo ethile.
The ningi ngesikhathi inhlanhla ku-inthanethi futhi ukuphila kwangempela
Vampire: umsuka indaba, le nganekwane
Grill elalinesitofu ngezitini noma insimbi: picture, incazelo, ukukhweza ubuchwepheshe
Isiraphu "Edene": imfundo, ukubunjwa, isicelo, intengo, ukubuyekezwa kanye analogue
Kuyini yogurt singabasiza abantu
Alps Bavarian: izikhangibavakashi, izinkambo, ukubuyekezwa
Urban - lokho oyikho nalokho ibadla?